Iinqununu, uphando kunye nezinto ezintsha
"Ukucofa kweqhosha kunakho ukuvula enye inkalo", ubhala, ngasekupheleni kwenqaku lakhe, uMuthukumar Kumar, ebhekisa ngokukodwa ekudalweni kweendawo ze3D, ukuba luncedo, ukubaluleka kunye nekamva. Qaphela ukuba ukuthetha ngekamva, ngendlela esisusa kude kwi-charlatanism elula, kufuneka ukuba eli gama libe ...
Geospatial - GIS, ezintsha, egeomates My
Emva kokufunda inqaku eliqala ngokuzibuza ukuba ingaba bafuna ntoni na abaqeshi be-GIS, bendizibuza ukuba ezi zigqibo zinokugqithiselwa njani kumazwe ethu asekhaya izinto zabo ezinokuthi zifane okanye zahluke (mhlawumbi zahluke kakhulu) kwezakho. 'Izinto eziluhlaza' ezazisetyenziselwa isifundo zonke zazinikezelwa ...
Omnye umntu kwafuneka ayenze loo mbono yokuhlala kwindawo enye, iqela labantu abangafaniyo kwaphela kubuntu, ukucinga kunye nemeko yenkcubeko, kodwa bongezwe okwahlukileyo kokuthetha iSpanish, banomdla omkhulu wento eyenzekayo kwimeko ye-geospatial. Imalunga "neNtlanganiso yeSizwe ye-Geobloggers", ekhuthazwe kwi ...
Okufumaneka, egeomates My
Yonke imihla, amazwe agxila kwi-e-government trends, apho iinkqubo zenziwa lula ekukhangekeni kokubonelela ngeenkonzo ezingcono kubemi, kunye nokunciphisa imida yorhwaphilizo okanye urhulumente ongenamsebenzi. Siyazi ukuba umthetho, amaziko kunye neenkqubo malunga nepropathi kwilizwe ngalinye ...
Ngaba ukwenza umsebenzi nge-LiDAR kunokuchaneka ngakumbi kunokwenza uphando oluqhelekileyo? Ukuba ucutha ixesha, ngepesenti iphi? Linciphisa malini? Amaxesha atshintshile ngokuqinisekileyo. Ndikhumbula xa uFelipe, umvavanyi owayendisebenzela endle, weza nephepha elinamaphepha angama-25 elinamacandelo eminqamlezo ukuze ...
Okufumaneka, Zobunjineli, egeomates My, Topography